Global Voices teny Malagasy » ‘Mamatsy Vola Ireo Mpikirakira Zava-mahadomelina, Amin’ny Fomba Goldman Sachs’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Jona 2017 20:45 GMT 1	 · Mpanoratra Elizabeth Rivera Nandika (fr) i Suzanne Lehn, imanoela fifaliana
Sokajy: Amerika Avaratra, Amerika Latina, Etazonia, Venezoela, Ady & Fifandirana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna, Zon'olombelona
”Bolivar, ilay malemy”. Sary tao amin'ny Flickr an'i Mariely Hernández. Nampiasaina teo ambanin'ny fahazoandàlna CC 2.0
Ny Alahady 28 May, notaterin'ny Gazety Wall Street  fa nividy trosa venezoeliana mitentina 2,8 lavitrisa dolara amin'ny vidiny 31 santima ny dolara iray, ilay orinasa Amerikana maro rantsana erantany, Goldman Sachs. Navoakan'ny PDVSA,  orinasam-panjakana misahana ny solika, ireo trosa ireo ary ho tapitra amin'ny 2022, izay mitovy amin'ny fanomezana lelavola 865 tapitrisa dolara mahery ho an'ny fanjakana venezoeliana, izay voakenda ara-bola sy voatsipaka mafy.
Nanoratra lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe ”Financing Narcos the Goldman Sachs Way “ [Mamatsy Vola Ireo Mpikirakira Zava-mahadomelina, Amin'ny Fomba Goldman Sachs]” tao amin'ny Medium i Juan Bermudez, teknolojista sady mpandraharaha, ho ”fanazavàna ny rafitra pôlitika ao Venezoela sy hanakarana ny tsy firaharahiana lalina ny fitsipi-pitondrantena ao amin'ny Goldman Sachs”. Araka ny voalazan'i Bermudez :
Mety hilaza ny ankamaroan'ny olona hoe tsy misy na inona na inona mifanohitra amin'ny fitsipi-pitondrantena manoloana ny fakàna tombony aminà fifampiraharahana ara-bola izay mety hahazoana tombontsoa. Kanefa vantany vao takatrao hoe iza ireo olona nividianany an'ireo trosa ireo, mety hieritreritra ianao fa mijery ny fitambaran'ireo tantara mitohy Narcos sy The Big Short ao amin'ny Netflix.
Tsy manainga fanohanana sy fanajana toa ilay nodimbiasany i Nicolás Maduro, mpandimby notsongaina an'i Hugo Chavez. Eo anivonà krizy ara-toekarena naharitra telo taona miaraka amin'ny haavon'ny heloka bevava mifono herisetra sy ny fahantrana tsy takatra hatrizay, vao mainka nilentika kokoa ny lazan'i Maduro taorian'ny fanonganam-panjakana nataony tamin'ny tenany tamin'ny 30 Martsa, rehefa nosandohan'ny Fitsarana Tampony ny anjara asan'ny Antenimieram-pirenena  amin'ny fanomezany alàlana ny Filoha Maduro mba hitazona ny sasany amin'ireo asan'ny mpanao lalàna — famindra izay nitsimbadika telo andro taty aoriana. Tsy irery ny fanoherana ao Venezoela tamin'ny fanamelohana izany famindra ara-pôlitika izany: nanasazy mpitsara valo avy ao amin'ny Fitsaràna Tampony Venezoeliana i Etazonia , amin'ny fangiazana ny fananany sy amin'ny fanaisorana ny fahazoandàlan-dry zareo hivezivezy any Etazonia, ho sazy tamin'ny fanendahany ny Kôngresy Venezoeliana.
Telo volana nahitàna fihetsiketsehana isanandro no nisy nanomboka tamin'izay, ary olona 60 farafahakeliny no maty  tao anatin'ny fifanandrinan'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro filaminana. An'aliny farafahakeliny ireo mpanao fihetsiketsehana nahiditra am-ponja. Manampy i Bermudez :
Ny tena manaratsy ny zava-misy dia ny tsy fisianà fizaram-pahefana mazava, na eo aza ireo fifidianana natao taty Venezoela. Ampiasaina hampanginana ny vavan'ireo mpanohitra ara-pôlitika sy ireo gazety malalaka fotsiny ny rafi-dalàna, fa manome fahalalahana an'ireo mpanao pôlitika mpanao kolikoly, ireo mpikirakira zava-mahadomelina, ireo mpaka an-keriny sy ireo mpamono olona. Izany no nahatonga ny firenena ho isan'ireo toerana mahery setra sy mampidi-doza indrindra maneran-tany, miaraka aminà tatira vono olona maherin'ny 25.000 tamin'ny 2016 ho anà mponina izay mihoatra kely fotsiny ny 30 tapitrisa.
Fa tsy ny fitondrana jadona sy fanaovana tsinontsinona ny zon'olombelona irery ihany no iampangàna ny fitondran'i Maduro. Eo ambanin'ny fitondrany, lasa ”toerana masina ho an'ny heloka bevava, ny fampihorohoroana sy ny kolikoly” ny firenena, hoy i Bermudez:
Malaza ho iray amin'ireo tetezana lehibe indrindra eran-tany fivezivezen'ny zava-mahadomelina i Venezoela. Fitoeran'ny “El Cartel de los Soles” ( Ny Kartelin'ny Masoandro ) izy, izay tambajotranà zava-mahadomelina tarihinà mpitondra fanjakana sy ireo manampahefana ambony ao amin'ny tafika, miara-miasa amin'ny FARC, fikambanana Kolombiana mpampihorohoro sady mpikirakira zava-mahadomelina. Mindrana ny anarany avy amin'ireo medaly lanjain'ireo manamboninahitra eo ambony sorony ilay kartely.
Voampangan'ny Etazonia ho mpikirakira zava-mahadomelina ireo mpikambana manana ny maha-izy azy ao amin'ny tafika sy ao amin'ny governemanta. Ao anatin'ireo raharaha malaza indrindra ireo zanaky ny mpiray tampo amin'ny vadin'ny Filoha Venezoeliana, voampanga ho niray tsikombakomba tamin'ny fandefasana kôkaina tany Etazonia, sy ny Lefitry ny Filoha Venezoeliana Tarek El Aissami izay 3 lavitrisa dolara tamin'ny fanànany no nogiazana noho ilay Lalàna Fanondroana ireo Vahiny Lehiben'ny fikirakiràna zava-mahadomelina.
Ka hatramin'izao, ny vahaolan'i Maduro dia ny fampiantsoana ”antenimiera mpandrafitra”  iray izay hanova ny lalàmpanorenan'ny firenena amin'izao fotoana izao (fandaminana iray mbola tsy ankatoavin'ny ankamaroan'ny vahoaka venezoeliana) sy ny firongatry ny heri-pamoretana ny mpanohitra amin'ny alàlan'ny fanitarana ny fepetra amin'ny tany tsy milamina  sy ny fanamafisana ny herisetra ataon'ny mpitandro filaminana  eo amin'ireo mpanohitra. Eo afovoan'izany korontana izany, manome ny heviny mikasika ireo fividianana mampiady hevitra ataon'ny Goldman Sachs i Bermudez:
[…] Toa tsy raharahan'ny Goldman Sachs ny fanomezany tahiry ho fanodinana ny tambajotra tsy refesi-mandidin'ny mpikirakira zava-mahadomelina izay mitantana ny firenena mba hahafahany miodina. Ary mialohan'ny hidikidiran'ny olona sy hanohanany fa novidiana tamin'ny banky foiben'i Venezoela ireo trosa ireo fa tsy tany amin'ireo mpanao ratsy , takaro fa tantanan'ireo minisitra notsongain'i Maduro toy ny orinasa manokana ireo fikambanam-panjakana ireo. Tsy misy ny fanarahamaso ary azo inoana fa ho ampiasaina mba hihazonana azy ireo eo amin'ny fitondrana ny vola maherin'ny 800 lavitrisa dolara aloan'io fikambanana fampiasam-bola io.
Ankoatra ireo fahavoazana mivantana ateraky ny Goldman Sachs amin'ny vahoaka venezoeliana, rehefa hahatratra ny fe-potoany ireo trosa ireo amin'ny 2022, mety mbola tsy ho tafiarina amin'ny loza ara-toekarena nateraky ny rivopanovàna sosialistan'ny taonjato faharaika amby roapolo ny firenena. Nivarotra sy nahabankirompitra ny ankamaroan'ny fitaovam-pamokarana aty amin'ny firenena izy ireo, ary tsy nampidi-bola tamin'ny fanorenana fotodrafitrasa, tsy namorona loharanom-bola hafa, nanangon-trosa manerana an'i Shina, i Rosia sy ireo banky iraisam-pirenena ary efa avo be ny risika mety tsy ahafahany mandoa izany ara-potoana.
Fa raha mijery ny fomba fiasan'ny Goldman Sachs tany aloha, tsy olana ho azy ireo mihitsy ny tsy fahafahan'i Venezoela hijoro ho tompon'antoka amin'ny trosany. Rehefa tonga ny fotoana, efa nakan'izy ireo taratasy famindrana anarana sy novarotany tamin'ny vahoaka Amerikana ireo trosa ireo, mialohan'ny hamefeny ny famelezana azy ireo, toy ny nataony folo taona lasa izay.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/06/30/101448/
 Gazety Wall Street: https://www.wsj.com/articles/goldman-sachs-bought-venezuelan-oil-co-bonds-last-week-1496020176
 anjara asan'ny Antenimieram-pirenena: https://fr.globalvoices.org/2017/04/05/208471/
 nanasazy mpitsara valo avy ao amin'ny Fitsaràna Tampony Venezoeliana i Etazonia: http://abcnews.go.com/International/us-sanctions-venezuelan-supreme-court-judges/story?id=47501248
 olona 60 farafahakeliny no maty: https://twitter.com/hannahdreier/status/869629592851681281
 Kartelin'ny Masoandro: https://en.wikipedia.org/wiki/Cartel_of_the_Suns
 ”antenimiera mpandrafitra”: https://globalvoices.org/2017/05/07/is-this-the-end-of-the-fifth-republic-in-venezuela/
 fepetra amin'ny tany tsy milamina: https://globalvoices.org/2017/06/01/netizen-report-in-state-of-emergency-internet-shutdowns-leave-ethiopians-and-venezuelans-struggling-to-connect/
 fanamafisana ny herisetra ataon'ny mpitandro filaminana: https://globalvoices.org/2017/04/19/for-venezuelas-government-protesting-is-terrorism/